Kitra – «Orange pro league 2021»: hanala vela amin’ny Adema ny CS-Disciples FC | NewsMada
Kitra – «Orange pro league 2021»: hanala vela amin’ny Adema ny CS-Disciples FC
Hitohy, amin’ity faran’ny herinandro ity, ny fifanintsanana hiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara, taranja baolina kitra «Orange pro league 2021». Lalao telo ho an’ny kaonferansy atsimo ny voalahatra amin’izany. Anisan’ny fihaonana andrasan’ny rehetra ny fifandonan’ny AS Adema sy ny CS-DFC Vakinankaratra, hotanterahina etsy amin’ny kianja Elgeco Stadium, rahampitso alahady 7 marsa. Hanala vela amin’ny ekipan’ny seranam-piaramanidina Ivato, amin’ity, ny CS-DFC.
Raha tsiahivina, mitarika vonjimaika ny Adema, ho an’ity kaonferansy atsimo ity, manana isa 16 raha eo amin’ny fahefatra kosa ny CS-DFC, nahazo isa 10, saingy mbola tara lalao iray raha mitaha amin’ity mpifanandrina aminy ity. Hiady ny fihaonana satria efa mifankahalala tsara ireo mpilalaon’ny andaniny sy ny ankilany. Efa samy tafiditra tsara ao anatin’ny hafainganam-pandehan’ny fifaninanana avokoa mantsy ny ekipa mifaninana, amin’ity “Orange pro league” ity.
Ankoatra izay, hafana vay ihany koa ny fifanatrehan’ny Ajesaia sy ny Uscafoot, amin’ity asabotsy 6 marsa ity, eny amin’ny kianja Elgeco Stadium. Fihaonana tokony ho natao ny andro voalohany, amin’ny lalao mandroso ity. Marihina fa eo amin’ny laharana fahatelo ny Ajesaia, amin’izao fotoana izao, ary manana isa 11 raha isa 7 kosa ny an’ny Uscafoot, eo amin’ny laharana fahenina.
Any amin’ny kianja Ampasambazaha kosa no hifampitana ny FCA Ilakaka sy ny Zanakala FC. Tsiahivina fa nandresy tamin’ny isa 2 no ho 1 ny Zanakala, nandritra ny lalao mandroso.